Moto Z Play, nyocha na uche | Gam akporosis
Alfonso de Frutos | | Motorola, Nyocha
Ọbịbịa nke ụdị Lenovo na nduzi nke Motorola emeela ka ndị North America nwee ike ịnọgide na-enwe amamihe ha nke ọnụahịa ọdịnaya na sọftụwia dị mma. Na ahịrị Moto nke Lenovo bụ ihe atụ nke ya.
Taa m wetara gị a nyocha vidiyo zuru ezu nke Moto Z Play, a ngwaọrụ na nzọ na a modular imewe na nwere ụfọdụ-akpali nnọọ mmasị ịtụnanya.
2 Nka na ụzụ e ji mara ndị Moto Z Play
3 Ihuenyo nke na-ezukọ karịa ihe a na-atụ anya ya n'etiti etiti
4 Moto Mod, na-anwale JBL SoundBoost ọkà okwu
5 Batrị na-anaghị agwụ agwụ
7 Foto ndị nwere igwefoto Moto Z Play
Ihe owuwu nke egwuregwu Moto Z doro anya bụ isi ihe na-egosi na ọnụ na ebe akara ahụ tinyegoro mgbalị nke ukwuu na ịnwe ya n'aka na-enye ezigbo obi ụtọ. Ọ na-aga nke ọma.
Anyị na-ekwu maka ekwentị wuru gburugburu chassis otu onye dara dara na a elu mma sandblasted aluminum eku. The ngụkọta imecha siri ike, na abụọ cristales Gorilla Glass setịpụrụ ma n'ihu na azụ, nke na-enye ngwaọrụ nnukwu iguzogide ụjọ na ịda.
Dịka m kwuru, mmetụta dị na aka dị ezigbo mma ma na-egosi ọrụ ọma Motorola rụrụ na nke a. N'ezie, nha ahụchaghị nke ọma ebe ọ bụ na ịnwe ihuenyo 5.5-inch, ekwentị buru ibu(156.4 x 76.4 mm) na-adabere na nnukwu ala, nke bụ ebe ọ na-ede akwụkwọ mkpịsị aka.
Ee, nke ha 7mm ọkpụrụkpụ ha na-eme ka ngwaọrụ ahụ bụrụ ezigbo ọnụ. Tụkwasị na nke ahụ, ịdị arọ ya nke gram 165 pụtara na Moto Z Play anaghị echegbu aka mgbe ejiri awa ole na ole.
Mee ka nke ahụ pụta ìhè na Moto Z Play nwere a n'ihu okwu Nke ahụ dị ezigbo mma, aconector maka Moto Mods na ala azụ, reversible USB Type-C connector na ọkọlọtọ ọdịyo 3.5mm dị na ala.
Na mkpokọta, a ọcha imewe nke na-egosi ezi ọrụ nke onye na-emepụta ihe na nke a, na-enye Moto Z Play na njedebe zuru oke nke na-eme ka ekwentị ọhụrụ na Moto Z akara bụrụ nhọrọ a na-achọsi ike.
Nka na ụzụ e ji mara ndị Moto Z Play
Akụkụ 156.4 x 76.4 x 7 mm
Usoro njikwa Android 6.0.1 Marshmallow
Igwefoto na-aga n'ihu 16 megapixels na f / 2.0 27 / OIS / autofocus / nchọpụta ihu / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / 1080p ndekọ vidiyo na 30fps
Igwefoto ihu 5 MPX / vidiyo na 1080p
Atụmatụ ndị ọzọ ngwa Nchaji usoro / mkpisiaka mmetụta / Cdị C ọdụ ụgbọ mmiri / Water nano mkpuchi (ikwommiri eguzogide ọgwụ) / dakọtara na Moto Mod
Batrị 3.510 mAh na-enweghị ike iwepu ya
Ahịa Na ire na Amazon maka naanị 379 euro na ịpị ebe a
Na nhazi a, nke anyị hụwororịị na ngwaọrụ ndị ọzọ, anyị na-eche ihu n'etiti etiti nke ga-egbo karịa mkpa nke onye ọrụ ọ bụla. Mgbe m nwesịrị ya ruo otu ọnwa, enwere m ike ikwenye na ọnụ ya na-arụ ọrụ nke ukwuu were wereỌ naghị ata ahụhụ site na jerks na, dịka ị nwere ike ịhụ na nyocha vidio anyị, Moto Z Play nwere ike ịmegharị egwuregwu ọ bụla, n'agbanyeghị ole ike eserese ọ chọrọ, na-enweghị nnukwu nsogbu.
Ngwaọrụ ahụ na-agagharị gam akporo 6.0 ngwa ngwa na nwayọ, na-enye ọmarịcha arụmọrụ n'akụkụ niile. Ka anyị chetakwa nke ahụ Motorola na-etinye aka na nhazi pere mpe, ihe m hụrụ n'anya nke ukwuu ma na-eme ka ọnụ ahịa ahụ rụọ ọrụ nke ọma na enweghị ngwa nke ngwa junk.
Agụ akwụkwọ mkpisiaka nke Moto Z Play ọ na-arụ ọrụ nke ọma, na-enye ọsịsọ ịgụ na akara aka ziri ezi. N'ezie, ọ dị m ka nha ahụ pere mpe pere mpe, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị echebara oghere dị na ala nke ihu ngwaọrụ ahụ echiche. Echere m na n'akụkụ a Motorola kwesịrị ime ka ọ bụrụ onye na-agụ biometric.
Ihuenyo nke na-ezukọ karịa ihe a na-atụ anya ya n'etiti etiti
Motorola na-eche nzọ nke Samsung iji nye ndụ ya ọnụ na Moto Z Play bụ ihe atụ ọhụrụ nke a. O doro anya na ị ga-akwụ ụgwọ ma pụọ ​​na ogwe QHD 1.440p, mana agbanyeghị na ihuenyo Moto Z Play dị ezigbo mma.
Ana m ekwu banyere ap5.5-anụ ọhịa Super AMOLED panel na mkpebi HD 1080 zuru ezu py nke na-ahapụ njupụta nke pikselụ 41 kwa inch, nke sụgharịrị ịbụ ezigbo ahụmịhe onye ọrụ.
Ogwe ndị a karịrị karịa, mana maka ndị na-amaghị teknụzụ a, kwuo nke a Super AMOLED meziri na-ekwe nkwa agba agba doro anya na-enwu enwu na ihe nlere na-enweghị ngwụcha ikiri akụkụ, na mgbakwunye na ụda ojii kachasị dị omimi nke enwere ike ịnweta na ama.
Ikwu ya ndi ocha dikwa nma na, n'ozuzu, ọnụ na-enye nnukwu nghọta. Anyị nwekwara ike ịhazigharị ọkwa saturation dịka o si masị anyị.
N'èzí lihuenyo na-arụ ọrụ nke ọma, na-ekwe ka elere ọdịnaya ya na gburugburu ebe kachasị mma, na mgbakwunye Motorola's Ambient Display na-enye ohere oge na ọkwa iji gosipụta na ihuenyo ahụ ma ọ na-eri obere ihe ekele maka teknụzụ eji na panel.
Moto Mod, na-anwale JBL SoundBoost ọkà okwu
Otu n'ime ihe kachasị iche iche nke Moto Z akara na-abịa na Moto Mod. Na, na usoro kachasị ọcha nke Ara Ara, onye nrụpụta etinyela njikọ na azụ nke ngwaọrụ iji tinye n'akụkụ dị iche iche. Agbalịrị m ndị okwu JBL Sound Boost maka Moto Z na nsonaazụ ya dị ịtụnanya.
Banyere imewe, ndị JBL Booda Boost nwere ihe mara ezigbo mma ma mechaa. Otu nkọwa m masịrị m bụ na ọ na-abịa na ibe nke ga-abụ nkwado na-akpọ anyị ka anyị nwee obi ụtọ ọdịnaya nke multimedia ma ọ bụ egwuregwu vidiyo na ụlọ ọrụ.
Nkọwa ọzọ dị ịrịba ama na-abịa na eziokwu ahụ ndị na-asụ JBL nwere nwere batrị Ya mere, anyị agaghị eri batrị nke Moto Z ma ọ bụ Moto Z Play, mana ha bụ ihe dị iche iche.
Soundda dị mma dị mma nke ukwuu, na-akarị ihe enwetara na ọkà okwu dị n'ihu, mana gram 115 ya naọnụahịa dị elu (euro 89) na-eme ka ihe karịrị otu onye ọrụ chee echiche ugboro abụọ.
Batrị na-anaghị agwụ agwụ
Uzo ozo di ike, ya na ihe okike ya, bu ihe doro anya na ochichi nke ulo a. Moto Z Play na-aga a 3.510 mAh na-abụghị nke mbughari batrị.
Anyị maara na batrị a Moto Z Play ga-enye ezigbo arụmọrụ, gbakwunyere n'eziokwu na ọ na-abịa na igbe ahụ chaja TurboPower nke, dị ka onye nrụpụta si kwuo, na-ebo ebubo ihe ruru awa 9 nke nnwere onwe naanị nkeji 15 mgbe etinyere ya.
Ọ bụ ihe nwute na chaja nwere USB Type C webakọtara yabụ anyị agaghị enwe eriri na-enye ohere ịmekọrịta na PC. Laghachi na nnwere onwe, kwuo nke ahụ Enwere m ike iji ekwentị n'enweghị nsogbu ruo ụbọchị 2 n'usoro, ihe dị ole na ole njedebe nweta.
Mgbe m nyere ya ihe kpụ ọkụ n'ọnụ, Moto Z Play diri otu ụbọchị na ọkara n'enweghị nsogbu, ya mere enwere m ike ịsị na arụmọrụ ya n'akụkụ a karịrị nke ziri ezi, na-akarị ọtụtụ n'ime ndị asọmpi ya.
N'ikpeazụ anyị banyere ngalaba nke ese foto. Ee ee, onye nrụpụta ahụ arụwo ezigbo ọrụ na ngalaba a. Ya Igwefoto megapixel 16 nwere sọrọ-ụda flash rụrụ Dị nnọọ mma captures dị ka ogologo oge anyị nọ na-ọma-enwu gburugburu.
N'ime ụlọ na site na enyemaka nke ọkụ ahụ, anyị nwere ike ịse foto na-enweghị oke mkpọtụ, mana mgbe anyị na-achọ ịse foto foto n'abalị, anyị ga-ahụ mkpọtụ a na-atụ ụjọ.
Igwefoto igwefoto nwere oru di iche iche, dika mode ntuziaka nke ahụ ga-enyere anyị aka ịhazigharị ihe ọ bụla nke igwefoto Moto Z Play, dị ka nguzo ọcha ma ọ bụ ọkwa ISO, mana ọ bụ interface dị mfe, nke na-abịa na ezigbo gam akporo.
Foto ndị nwere igwefoto Moto Z Play
Ejiri Moto Z Play nke ọma. Bụ ekwentị nke ga-adọta ọtụtụ anya nakwa na o nwere ezigbo ngwaike na dị elu karịa nkezi obodo kwụụrụ. Ọ kachasị mma kachasị elu na ahịa? Banyere ihe ndị masịrị gị, agba ya, mana ọ bụ n'elu 3.
Super AMOLED ngosi
100% gam akporo ahụmahụ, dịghị Chọpụta nke bloatware
Oke nha / ihuenyo ruru
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Moto Z Play, nyocha na echiche
Motorola ga-ekwuputa ekwentị ya ọzọ echi June 1